Emelitere | Mmachibido COVID ọhụrụ na Hawaii maka ndị ọbịa na ndị bi
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii » Emelitere | Mmachibido COVID ọhụrụ na Hawaii maka ndị ọbịa na ndị bi
Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii • Akụkọ Ahụike • Hotels & Ebe ntụrụndụ • nzukọ • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Mgbakọ akụkọ ndị gọvanọ Hawaii Ige August 10
Hawaii sitere na mmụba kacha ala na ọrịa COVID, ruo ọnụọgụ ịgba ọgwụ mgbochi kachasị na United States, ruo ụfọdụ ọnụọgụ ọrịa kachasị elu, ebe njem na -aga n'ihu. Taa Gọvanọ Ige meghachiri omume mgbe ụlọ ọgwụ juputara na ikike na Aloha Steeti.
Gọvanọ Hawaii Ige kwuru na a na -eme ihe mgbochi ọhụrụ maka ndị bi na ndị ọbịa ozugbo
Gọvanọ Hawaii David Ige kwupụtara usoro ọhụrụ iji belata mgbasa nke COVID-19 Delta dị na steeti ahụ.
A na -edobe ikike n'ụlọ nri, mgbatị ahụ, ntọala ime ụlọ na 50%.
Ndị na -elekọta ụlọ dị ka ụlọ oriri na ọ mustụ mustụ ga -anọrịrị 6 ụkwụ iche.
Na COVID na -abawanye na nchịkwa na Hawaii, mkpa ọ dị idobe njem njem na njem nlegharị anya na -aga n'ihu nwere ike gbuo oge mgbochi Gọvanọ David Ige tinyere taa.
Ọtụtụ ndị ọbịa na ụmụ amaala nwere ike ịdị mfe nke ukwuu iji ihe mgbochi akpọrọ ihe.
Ọ gụnyere ndị na -emebi iche iche, ihe ndekọ ịgba ọgwụ mgbochi CDC adịgboroja, na nnọkọ iwu na -akwadoghị. Gọvanọ ahụ kwuru na a na -eji ike emegide ụdị mmebi iwu a, mana enweghị ikike mmadụ zuru oke na ngalaba ndị uwe ojii ịchụ ndị niile dara iwu.
Dị ka ọ dị taa ụlọ nri, ụlọ mmanya, mgbatị ahụ na steeti Hawaii aghaghị ịnagide mgbochi ọzọ.
A na -ahapụ ụlọ ọrụ ndị a ka ha ghe oghe, mana ikike pere mpe na 50%.
Oke ikike ime ụlọ n'ime ụlọ ahịa na ebe egwuregwu ndị ọzọ bụ 10, mpụga bụ 25.
N'ọtụtụ ụlọ nri dị na mpaghara ndị njem dị ka Waikiki na -arụ ọrụ mgbe niile na -enweghị mgbochi ndị dị otú a, nke a ga -abụkwa ihe ịma aka maka njem na njem nlegharị anya Hawaii.
Mmachibido dị nro ma e jiri ya tụnyere mkpọchi mkpuchi zuru ezu nke etinyere otu afọ gara aga yana ọnụọgụ ọrịa dị ala karịa ugbu a
Gọvanọ zere mmeghachi omume ma ọ bụrụ na a ga -etinye mmachi na ikike nkwari akụ ma ọ zaghị eTurboNews na ọgbakọ ndị nta akụkọ taa maka okwu a.
Gọvanọ ahụ kwuru na agaghị enwe mgbanwe ọ bụla ma ọ bụ ihe mgbochi ọzọ maka ndị njem chọrọ ịga leta ya Aloha Steeti. Mmemme njem na -adịghị ize ndụ ga -adịgide dị ka ndị ọbịa ọgwụ mgbochi ọrịa nwere ike ịbịa na -enweghị nyocha ọzọ.
Gọvanọ ahụ kwetara na ụkọ ule dị.
Agbamakwụkwọ, olili ozu, ụka, ihe nkiri na mmemme egwuregwu nwere mmadụ iri ise na ndị ọzọ ka ndị ọchịchị obodo ga -ebu ụzọ kwado.
N'ime ọgbakọ ndị nta akụkọ taa ndị isi ala sitere na agwaetiti Hawaii niile na -akwado mkpebi Gọvanọ Ige.
Onye isi obodo na Maui nwere nchegbu gbasara ụlọ ọgwụ na ICU na -arụ ọrụ karịa ike.
Ọ na -ekwu mgbe ndị mmadụ na -achọ ọrụ mberede n'ụlọ ọgwụ ma ha enweghị ike ịnapụta, nke a bụ ahịrị uhie, anyị kwesịrị ime ihe.
Edere okwu nke iwu mberede nke Hawaii Gov. Ige kwuru
IWU NDỊ ECHICHE NO. 21-05
(Oke steeti niile maka nnọkọ oriri na ọ Socialụ Socialụ, ụlọ mmanya,
na Nlekọta Ọha)
Ọ BỤRỤ na, na Machị 4, 2020, m wepụtara mkpọsa na -ekwupụta steeti
ihe mberede iji kwado nzaghachi steeti na mpaghara na -aga n'ihu maka Ọrịa Coronavirus
Ọ BỤRỤ, m mechara nye ọtụtụ nkwupụta metụtara ọrịa COVID19, gụnyere mkpọsa nke na -akwụsịtụ ụfọdụ iwu iji mee ka
Azịza steeti na mpaghara maka COVID-19; ma mejuputa mgbochi mmachi maka mmadụ niile na -abanye na Steeti ma na -eme njem n'etiti ógbè, nyere iwu
omume dị mma iji belata mgbasa nke COVID-19, wee guzobe ọgwụ mgbochi na
amụma nnwale maka ndị ọrụ steeti na ndị ọchịchị niile;
Ọ BỤRỤ, Delta, ụdị nje SARS-CoV-2 na-efe efe nke ukwuu ebutela
ọnụọgụ ikpe na -agbagharị agbagharị gburugburu ụwa na United States of America, na
na -aga n'ihu na -agbasa n'ike n'ike na Steeti anyị;
Ọ BỤRỤ, ụdị Delta nke nje SARS-CoV-2 agbanweela ụzọ
nke ọrịa na steeti anyị ngwa ngwa, nke mere na COVID-19 na-aga n'ihu na-etinye ihe egwu
ahụike, nchekwa, na ọdịmma nke ndị Hawai'i na -achọ ozugbo na
nlebara anya siri ike, mbọ, na ịchụ mmadụ niile nọ na Steeti iji gbochie enweghị nchịkwa
nsogbu na sistemụ nlekọta ahụike anyị yana mmetụta ọdachi ndị ọzọ na Steeti;
Ọ BỤRỤ na, n'agbanyeghị ihe ịga nke ọma nke mbelata steeti na mbọ ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa,
dabere na ihe ndị mere n'oge na-adịbeghị anya ịrị elu mberede COVID-19 n'ihi
ụdị Delta, ụlọ ọgwụ, na ọnwụ yana nkwenye siri ike sitere n'aka anyị
Ngalaba Ahụike na ndị ọkachamara ndị ọzọ na-enyere aka na nzaghachi COVID-19 na-aga n'ihu,
2 nke 3
mmejuputa oke steeti niile maka nnọkọ mmekọrịta, yana mgbakwunye
ndokwa maka ụlọ oriri na ọ ,ụ ,ụ, ụlọ mmanya, na ụlọ ọrụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya dị mkpa.
UGBU a, yabụ, mụ, David Y. Ige, Gọvanọ Hawai'i, na -agbaso nke m
ikike ọchịchị n'okpuru edemede V nke Iwu nke steeti Hawai'i, isi
127A, Iwu edegharịrị nke Hawaii, yana ikike ndị ọzọ niile metụtara, mee nke a n'iwu,
malite na Ọgọst 10, 2021, ndị a:
Maka mmejuputa steeti niile yana ka akọwara site na mpaghara ọ bụla (yana n'ime
dị na nkọwa akọwapụtara site na mpaghara ọ bụla):
a. Nzukọ Ọha. Nzukọ ime ụlọ nke ihe karịrị iri
amachibidoro mmadụ na nnọkọ oriri na ọ ofụ outdoorụ karịrị mmadụ iri abụọ na ise.
b. Ụlọ oriri na ọ ,ụ ,ụ, Ogwe, na ntọala ọha. Ụlọ oriri na ọ ,ụ ,ụ, Ogwe,
na ụlọ ọrụ na -elekọta mmadụ ga -etinye ntuziaka ndị a ka ha na -edobe
nha nha nnọkọ mmekọrịta achọrọ nke edepụtara n'elu yana dịka enwere ike ịkọwapụta nke ọma site na
i. Ndị nlekọta ga -anọnyere nnọkọ ha.
ii. A ga -ejigide ịdị anya ụkwụ isii n'etiti otu.
iii. Enweghị mmekọrịta.
iv. A ga -eyi ihe mkpuchi mgbe niile belụsọ mgbe ị na -eri nri
ma ọ bụ ị drinkingụ mmanya.
c. Mmemme Ọkachamara. Ihe omume ndị ọrụ ga -adarịrị steeti niile na
iwu obodo, iwu, na ntuziaka gbasara ọrụ. Ndị na -ahazi ọkachamara
ihe omume karịrị mmadụ iri ise (50), iji hụ na omume dị mma ga -adị
mee ka a mara ma jụọ ụlọ ọrụ na -ahụ maka mpaghara kwesịrị ekwesị n'ememe ahụ
3 nke 3
d. Mmachibido na ikike ime ụlọ. Maka ọrụ niile dị oke egwu, ime ụlọ
setịpụrụ ikike na 50%. Nke a gụnyere ụlọ mmanya, ụlọ nri, mgbatị ahụ, na mmekọrịta mmadụ na ibe ya
Mkpesa steeti niile edepụtara ebe a agaghị emetụta mpaghara ''
Iwu COVID-19 gbasara ngalaba ọrụ ndị ọzọ.
Usoro niile edepụtara ebe a ka ndị ọchịchị ga -eme
iwu obodo, iwu, na ntuziaka na -achọpụta mmejọ na ntaramahụhụ maka mpaghara ọ bụla.
Iwu a kagburu iwu, iwu, ma ọ bụ ntuziaka na -anaghị egbochi nke ọ bụla
ógbè ruo oke oke mkpa iji mezuo oke na mgbochi
dị n'ime ya.
Na agbanyeghị ndokwa edepụtara ebe a, onye isi obodo mpaghara ọ bụla
nwere ike ịnye iwu, iwu, ma ọ bụ ntuziaka ndị na -egbochikarị mmadụ.
Ọ gwụla ma usoro nke ọzọ ga -anọchi ya, Iwu mberede a ga-
kwụsị na Ọktoba 18, 2021.
Emere na Capitol State, Honolulu,
Steeti Hawai'i, ụbọchị iri nke a